वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४
on: १९ माघ २०७४, शुक्रबार १०:५५ अर्थान्तर
जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय
रामेश्वर दङ्गालको जन्म २०३० फागुन २९ गते भक्तपुरमा भएको थियो । उनले २०५७ सालमा जनप्रशासन क्याम्पसबाट एमपीए तथा २०६१ सालमा बर्गेन विश्वविद्यालय नर्वेबाट पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशनमा एमफिल गरेका छन् । २०५६ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शाखा अधिकृतबाट नोकरी आरम्भ गरेका दङ्गाल २०६३ सालमा उपसचिव र २०६९ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । उनले यस अवधिमा गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतमा काम गरिसकेका छन् । उनी २०७३ साल साउन १ गतेबाट जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जनसङ्ख्या तथा वातावरण महाशाखामा कार्यरत छन् ।
ऐन तथा नियमावली संशोधन आवश्यक
वातावरणीय ह्रासबाट मानव, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथासक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यले २०५३ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन जारी भई उक्त ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न २०५४ सालमा वातावरण संरक्षण नियमावली जारी गरिएको थियो । यो ऐन तथा नियमावलीले वातावरण संरक्षणका लागि कुनै पनि विकास निर्माण, भौतिक क्रियाकलाप वा भूउपयोगको परिवर्तन गर्ने योजना, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कानूनद्वारा नै व्यवस्थित र बाध्यात्मक बनाएको छ । यसका साथै फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, जैविक विविधता तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणजस्ता विषयलाई विशेष जोड दिएको छ ।
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगराई कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नहुने र त्यस्तो गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम जरीवाना गरी त्यस्तो कार्य रोक्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ । साथै वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्ने वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोरमैला निष्कासन गरेमा सो कार्य गर्न रोक्ने तथा दण्ड जरीवानासमेत गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
ऐन तथा नियमावलीका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । यसमा कुनै पनि प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत गर्ने तथा सोको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र आफ्नो विषयगत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सङ्घसंस्था वा निकायले वातावरण प्रदूषण गरेमा सोसमेत अनुगमन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । प्रस्तावको वातावरण परीक्षण मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्ने र सो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको २ वर्षपछि वातावरण परीक्षण गर्ने र वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न मापदण्ड लागू गर्ने अधिकार जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, नियममा उल्लिखित विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासहित उनीहरूको कामकर्तव्य र अधिकारसमेत ऐनले तोकेको छ । मार्गदर्शन र रायसल्लाह दिन तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नसमेत वातावरण संरक्षण परिषद्को व्यवस्था ऐनले गरेको छ । वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणका लागि वातावरण संरक्षण कोषको नाममा एक कोषको स्थापना हुने र उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट, विदेशी सरकार र अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, नियममा उल्लिखित विभिन्न व्यवस्थाले वातावरण संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रणमा केही उपलब्धि भए तापनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन थुप्रै चुनौती विद्यमान छन् । वातावरण संरक्षणमा अन्य विषयगत मन्त्रालयले ऐनले तोकेको अधिकार प्रयोग गर्न खासै चासो दिएको पाइँदैन र यो विषय वातावरण मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी जस्तो देखिएको छ । तर, वातावरण मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्ति, स्रोतसाधन हेर्दा यसले मात्र प्रभावकारी कार्य गर्न सकिने देखिँदैन । सबै निकायको सहयोग र समन्वय बेगर यो कार्य सम्भव पनि छैन ।
वातावरण संरक्षण कोषको स्थापना ऐनले गरे पनि यो कोषमा आवश्यक रकम व्यवस्था हुन सकेको छैन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको प्रदूषण शुल्कबापतको रकम यस कोषमा राखी परिचालन गर्ने मन्त्रालयको प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन ।
ऐनको व्यवस्था पालना नगरेमा हुने दण्ड जरीवाना २०५४ सालदेखि बढाउन नसकिएको र यो रकम न्यून भएकाले ऐन, नियमको पालना नगर्ने तर दण्ड जरीवाना तिर्न तयार हुने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । यसमा समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । राज्य पुनःसंरचनापश्चात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको अधिकारको बाँडफाँटसँग मेल खाने गरी तथा अन्य समसामयिक विषयसमेत समावेश गरी वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियममा संशोधन गर्न आवश्यक छ । मन्त्रालयले यसको गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ ।
पूर्वसचिव, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय
आर्थिक विकास र वातावरणबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुन्छ । कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, नपार्ने र त्यस्तो प्रभाव कुनै उपायले हटाउन वा कम गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा एउटा विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पनि भनिन्छ । अर्को हुन्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन । यसमा वातावरणीय विभिन्न पक्षको विस्तृत अध्ययन तथा मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ७ मा कसैले पनि वातावरणमा प्रतिकूल पार्ने गरी वा जनजीवन वा जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुने किसिमको प्रदूषण सृजना गर्न वा मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, विकिरण तथा फोहोरमैला निष्कासन गर्नु हुँदैन । यस्तो गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायले रोक्न पनि सक्छ । नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण क्षेत्र पनि तोक्न सक्छ । त्यसमा महŒवपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, दुर्लभ वन्यजन्तु वा जैविक विविधता, वनस्पति, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरू भए नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण क्षेत्र तोक्न सक्छ । त्यसैले ऐन तथा नियमावलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके वातावरण संरक्षण राम्रोसँग गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् आयोजनाले वातावरण संरक्षण गरेको छ
वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले विद्युत्को क्षेत्रलाई कसरी समेटेको छ ?
वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले मुख्यतया वनको संरक्षण र विस्तार गर्ने विषयलाई समेटेको छ । तर, धूलो, धूवाँरहित स्वच्छ गाउँशहरको परिकल्पना गर्न सकेको छैन । त्यसैले यसलाई तत्काल संशोधन गरी सभ्य र आधुनिक समाजको निर्माण गर्ने ऐन तथा नियमावली बनाउन जरुरी छ ।
त्यसो भए नियमावलीले विद्युत् उत्पादन गर्न सहयोग गरेको छैन त ?
नेपाल २७ प्रतिशत गाउँ र शहर, १८ प्रतिशत हिमाल तथा ४५ प्रतिशत भूभाग जङ्गलले ढाकेको छ । सबैभन्दा धेरै ४५ प्रतिशत भूभाग जङ्गल रहेकाले वातावरण संरक्षण भएको छ । तर, त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छैन । यसले धूलो बाटोलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसैले वातावरण नियमावलीलाई विकासप्रेमी बनाउन जरुरी छ ।
विद्युत् आयोजनासँग वन र वातावरणको कस्तो सम्बन्ध छ ?
विद्युत् आयोजना बनेका ठाउँमा बाटो बनेको छ । विद्युत् आयोजना वरपरका मानिस जसले दाउराबाट खाना पकाउँथे अहिले ग्यासको प्रयोग गरेका छन् । विद्युत्को प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । घर बनाउन प्रयोग हुने काठपातको विकल्पमा फलामको प्रयोग गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाले वन र वातावरण विनाश हुनबाट जोगाएको छ । त्यसैले पनि आयोजना धेरै ठाउँमा बन्नुपर्छ । अनि मात्र वन र वातावरणको संरक्षण हुन्छ ।
वन ऐन, २०४९ मा एउटा रूख काटेपछि २५ ओटा रूख लगाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । यो तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
हामी आयोजना निर्माण गर्ने मान्छे हौं, वृक्षरोपण गर्ने होइनौं । वृक्षरोपण र वन जोगाउन वन मन्त्रालय छ । त्यति मात्र नभएर अहिले स्थानीय तहहरू पनि छन् । यो काम उनीहरूबाटै गराउनुपर्छ । तर, त्यसको क्षतिपूर्ति वापत विद्युत् आयोजनाले पैसा तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा समृद्धिको मापक हो । कति ऊर्जा प्रतिव्यक्ति खपत हुन्छ, त्यसले त्यो देशको मानिस कति समृद्धि छन् भन्ने मापन गर्छ । नेपालको ऊर्जा खपत १ सय ३० युनिट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ । यो निकै कम हो । भारत हजार युनिट, चीन ३ हजार युनिटभन्दा बढी र नर्बे २४ हजार युनिट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत गर्ने देश हुन् । त्यसैले हामीले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरी खपत गर्ने समृद्ध देश बन्न जरुरी छ । अरब मुलुकले तेल उत्पादन गर्छ । यूरोप अमेरिकाजस्ता देशले तेल र आणविक स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्छन् । नेपाललाई भने प्रकृतिले वरदान स्वरूप खोलानाला दिएको छ । हामीले जलविद्युत् उत्पादन गरी बेचेर धनी मुलुक बन्नुपर्छ ।
महानिर्देशक, नेपाल उद्योग परिसङ्घ
नेपाल उद्योग परिसङ्घले विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन, खारेजी र नयाँ बनाउनुपर्छ भनी अभियान चलाएको छ, किन ?
देशले खुला, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक नीति अँगालेको छ । यस्तो समयमा पनि पुराना, एकाङ्गी, नियन्त्रणमुखी र अनुदार आर्थिक नीति राज्यव्यवस्थामा विद्यमान छन् । ती कानूनमा अत्यन्त पुराना एवम् असान्दर्भिक व्यवस्था छन् । तजबिजी निर्णय गर्न पाउने प्रावधान पनि छन् । त्यसले आर्थिक गतिविधिमा असहजता थपेको छ । फलस्वरूप देशमा औद्योगिक लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि आर्थिक, व्यापारिक कारोबार गर्दा हुने मानवीय वा प्राविधिक त्रुटिलाई आर्थिक कसुरअन्तर्गत कारबाही हुनुपर्नेमा फौजदारी कानूनसरह नै कारबाही र सजाय गर्ने पुरानो व्यवस्था अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन । उद्यमी, व्यवसायी वा करदाताबाट भूलवश भएका त्रुटिमा पनि थुनछेक गर्ने, तारीखमा अलमल्याउने र अनुचित रूपले हतोत्साही बनाउने कार्यले एकातर्फ लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यस्तो कारबाही युक्तिसङ्गत देखिँदैन ।
वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनिएको छ ?
निजीक्षेत्रलाई उत्पादनशील ढङ्गले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन विधिको शासन, प्रभावकारी सुशासनको प्रवद्र्धन र नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता छ । यी तीनओटा उद्देश्य प्राप्त गर्न हाल देशमा विद्यमान निकै पुराना ऐन कानून र तिनमा भएका विरोधाभासपूर्ण र अप्रासाङ्गिक प्रावधानहरू संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्न आवश्यक देखेर परिसङ्घले यस विषयमा आप्mनो कार्य प्रारम्भ गरेको हो । उद्योग व्यवसायको सञ्चालन र परियोजना निर्माण गर्न पहिले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (इनिसियल इन्भाइरोन्मेण्टल एक्जामिनेशन (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इन्भाइरोन्मेण्टल इम्प्याक्ट एससमेण्ट (ईआईए)सम्बन्धी वातावरणीय स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, यी दुवै प्रमाण लिने सिलसिलामा उद्योगीहरूले धेरै झण्झट बेहोर्नुपर्ने र समय पनि लामो लाग्ने गरेको छ । वातावरणीय स्वीकृति लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न विलम्ब हुने र समयको अन्तरले मेशिनरी, जग्गा, भवन निर्माणसमेतको लागतमा वृद्धि हुने हुँदा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन् । यसले आर्थिक विकास निर्माणको काममा नै प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति अहिले छ । यसैले वातावरणीय प्रभावको नाममा उद्योगीहरूलाई नै हतोत्साहित पार्ने कानूनी प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक देखेर परिसङ्घले यो ऐनमा समेत सुधारको पहल गरेको हो ।
कानूनमा गरिनुपर्ने सुधारका विषय कहाँ पुगेको छ ?
यस सम्बन्धमा परिसङ्घले एक बृहत् गृहकार्य गरी छलफलसमेत प्रारम्भ गरेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लागि प्रतिकूल हुने कानूनहरू पहिचान गरी कुनकुन कानूनमा कस्तो परिमार्जन, संशोधन वा खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने विषय पहिचान गरेर यी विषयलाई ठोस प्रस्तावसमेत तयार गरी सुझाव पेश गर्न परिसङ्घले कानूनविद्समेत संलग्न गराई एक ‘कार्यदल’ गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले १ महीनाभित्र सुझाव तयार गर्ने छ । उक्त सुझावलाई पुनः बृहत् छलफलमा ल्याई त्यसमा समेत आवश्यक संशोधनसहितको सुझाव नेपाल सरकारमा परिसङ्घले पेश गर्ने छ ।
प्रबन्ध सञ्चालक, गर्जाङ उपत्यका हाइड्रो पावर लिमिटेड
नेपालले अङ्गीकार गरेका धेरै नीति र विधिको स्थिति हेर्दा लाग्छ, हामी लिनुपर्ने नीतिमा धेरै पछाडि छौं भने नलिनुपर्ने नीति लिनलाई धेरै हतारो गर्दै छौँ । यस्तै हतारोमा लिइने नीतिहरू जनता र देशका लागि लाभकारी नभए पनि नीति निर्माण तहका लागि लाभदायी हुने गर्छन् । त्यसैले यस्ता नीति लोकप्रिय बाधकका रूपमा नेपालको विकास र समृद्धिका अगाडि निरन्तर खडा हुन्छन् । आर्थिक र वित्तीय एवम् बैङ्किङ नीति यसमा सबैभन्दा माथि रहेका छन् भने मानवाधिकारलगायत स्थानीय अधिकारका विषय र वातावरण दोस्रो तहमा रहेको छ । अहिले यी दुवै नीतिको मारमा परेको क्षेत्र हो, जलविद्युत् उत्पादन । कृषि र उद्योगको क्षेत्र प्रायः प्राथमिकतामा परेको छैन । यस्ता गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान दिने क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउन नीति र विधिहरू बाधक रहेको देखिन्छ । निजी मुनाफामूलक शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुत्पादक जमीन (घरघडेरी)मा ठूलो लगानी केन्द्रित भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न केही आकर्षण उत्पन्न भएकै थियो । तर, कृषि र उद्योगलाई समाप्त गरिसकेपछि अब नीतिरूपी धमिराको मार यस क्षेत्रमा पर्न शुरू भएको छ । बैङ्किङ क्षेत्रको बलशाली ‘मान्युपुलेशन’ र राष्ट्र बैङ्कको निरीहताका कारण ब्याजदर वृद्धिले अब यस क्षेत्रलाई पनि वित्तीय जोखीममा लाने सम्भावना बढेर गएको छ । अर्कोतर्फ वन तथा वातावरणका नीतिनियमलाई अनुसरण गर्ने स्थिति यति जटिल र नियन्त्रणात्मक छ कि त्यही कारणले परियोजनाको समय बढ्न गई लागतसमेत बढेको छ । वातावरण संरक्षणको लोकप्रिय आवरणमा यस्ता नकारात्मक नियन्त्रण गर्ने नीतिहरू नेपालको समष्टिगत विकासमा नै धमिरा भएर आएका छन् । यिनै नीतिमध्ये एक हो, वातावरण नियमावली ।
आखिर यस्ता लोकप्रिय बाधक नीतिहरू किन बारम्बार अनेक स्वरूपमा आइरहन्छन् । यसका पछाडि संलग्नहरूको विश्लेषण गर्दै जाने हो भने अन्तिम टुङ्गोमा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्तरराष्ट्रिय दाताहरूसम्म पुगिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता बाधक निर्माण गर्नुमा उनीहरूको मुख्य चासो के हो त ?
नेपालको भूरणनीतिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ । यस्तो संवेदनशील स्थानमा आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्न अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरू प्रयत्न गर्छन् । त्यही प्रयत्न नेपालमा शिक्षा, औद्योगिक, आर्थिक हुँदै आज वातावरणसम्बन्धी नीतिनियमका रूपमा आएका छन् । यसैको एउटा कडी हो, वातावरण नियमावली । पूर्वाधार विकासको शर्तमा स्वयम् विकासकर्ता वा प्रवद्र्धक नै वातावरणप्रति सचेत रहन्छन् । त्यस्ता आयोजनाबाट वन सम्पदाको दुरुपयोग रोक्न वनका स्थानीय एकाइहरू नै पर्याप्त छन् भने यस्ता नियन्त्रणमा नियमावली आवश्यक नै छैन । बृहत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा नै त्यहाँ पर्यावरणीय सरोकार सम्बोधन भएकै हुन्छ । त्यसका आतिरिक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, परियोजनाको कखरा पत्तो नहुने, समूहमा गएर नागरिक सुनुवाइजस्ता अनावश्यक प्रक्रियाहरू पनि जरुरी थिएन । यीबाहेक पनि थुप्रै त्यस्ता शर्त छन्, जो अनावश्यक छन् । एक वाक्यमा भन्दा यी नीति र नीयम नै लोकप्रिय तर बाधक हुन् ।
अहिले विद्युत् नियमन आयोगको कानून अगाडि आएको छ । यसैलाई जलविद्युत् क्षेत्रको प्राधिकरण बनाई उद्योग, कम्पनी र कर दर्ताबाहेकका सबै कार्य गर्ने अधिकार दिए ढोकाढोकामा गई बाधक नीतिनियमको गुलाम हुने बाध्यताबाट प्रवद्र्धकहरूलाई मुक्ति मिल्ला र लगानीको वातावरण पनि निर्माण हुन सक्ला ।